Akhriso mid kamid ah heshiisyadii ay Maanta kala saxiixdeen dowladaha Soomaaliya iyo Qatar - Caasimada Online
Home Warar Akhriso mid kamid ah heshiisyadii ay Maanta kala saxiixdeen dowladaha Soomaaliya iyo...
Akhriso mid kamid ah heshiisyadii ay Maanta kala saxiixdeen dowladaha Soomaaliya iyo Qatar
Doha (Caasimadda Online) – Wasiirka Caafimaadka Soomaliya Dr Fawziya Abiikar Nuur ayaa Hishiis iskaashi iyo wax wada qabsi la saxiixatay wasiirka wasaarada Caafimaadka Dowlada Qatar Dr Xanaan Mohamed Al kawaari.
Hishiiskaan oo mudo badan laga soo shaqaynaya oo kol hore ay labada wasaaradood isugu af garteen is fahan loo badalay hishiis ayaa maanta lagu hor saxiixay Madaxwayanaha Jamhuuriyada Somaliya iyo Amiirka qatar hortooda.
Hishiiskaan ayaa wuxuu ku qotomaa iskaashi xagga tayaynta iyo tababarada howlawdeenka caafimaadka , Sare u qaadidda tayada adeegyada isbitaallada iyo baahinta gurmadka dag dagga ah iyo wax ka qabdka cudurrada faafa.
Sidoo kale hishiiskan wuxuu soomaliya ka saacidayaa in la helo xarumo caafimaad oo bixiya adeegyo tayo leh iyo sidoo kale wuxuu wasaaradda caafimaadka soomaliya ka caawinayaa in ay yeelato awoodda fulinta gurmadka dagga dagga ah , tayanta isbitaalada guud ee dalka qalabaynta xarumaha lagu daaweeyo bukaanada iyo hirgalinta mashaariic iyo adeegyo caafimaad oo hor leh dalka guud ahaannna laga hirgaliyo.
Waxaa la filayaa in gudiyo farsamo oo isku dhaf ah ay ka wada shaqeeyaan hirgalinta hishiiskaan sidoo kalena ay yeeshaan qorshe howleed lagu fuliyo hishiiskaan taariikhiga ah.
Hishiiskaan wuxuu qayb ka yahay qorshayaasha guud oo ay wasaarada Caafimaadka soomaliya ka leedahay baahinta iyo fulinta daryeel caafimaad oo leh tayo lagu kalsoonyahay iyo sidoo kale kobcinta iyo sare u qaadidda aqoonta iyo xirfada shaqaalaha caafimaadka soomaliya